सर्पदंशबाट जोगिन कस्ता सावधानी अपनाउने ?- स्वास्थ्य - कान्तिपुर समाचार
काठमाडौँ — वर्षायामको सुरुवात भएसँगै डेंगु, मलेरिया, स्क्रब टाइफस, सर्पदंश लगायतका बिरामीहरु देखा पर्न थालेका छन् । नेपालमा पाइने सर्पहरुमध्ये गोमन, राज गोमन, करेत, मुगा, बाघे जस्ता सर्पहरु विषालु सर्पमा गनिन्छन् । सर्पको टोकाइबाट बच्न र टोकिहाले के गर्ने भन्नेमा सचेत रहन आवश्यक छ ।
सर्पदंशबाट जोगिन के गर्ने ?
राति हिँड्नु परे टर्च लाइट लिएर हिँड्ने
जुत्ता वा गम बुट लगाउने
खुट्टा राम्ररी छोप्ने बाक्लो प्यान्ट लगाउने
घर वरपरको घाँस, झारपाट काटेर सफा राख्ने
काठ, ढुंगा, टुटेफुटेका सामानको थुप्रो हटाउने
जमिनका प्वालहरु टाल्ने
पराल, दाउरा आदि तान्न जाँदा होसियारी अपनाउने
सुत्नुअघि ओच्छ्यान, खाटमुनि र वरपर राम्ररी हेर्ने
सर्प देखे टाढै रहने
डसेको ठाउँलाई चल्न नदिइ स्थिर राख्ने
सर्पले डसेको ठाउँमा काट्ने, चुस्ने ,बाँध्ने काम नगर्ने
कुनै पनि मलम, रासयनिक पदार्थ, तातो चिसो प्रयोग नगर्ने
बिरामीको आत्मविश्वास कामय राख्ने
सम्भव भएसम्म डस्ने सर्पको पहिचान गर्ने तर नमार्ने
बिरामीलाई जतिसक्दो चाँडो अस्पताल वा सर्पदंश केन्द्र पुर्‍याउने
प्रकाशित : असार १९, २०७८ २०:०३
लमजुङमा बाढीपहिरोले १३२ केभीको टावरमा क्षति
असार १९, २०७८ आश गुरुङ
लमजुङ — बाढीपहिरोले १३२ केभीको टावर बगाउँदा १३५ मेगावाट बढी विद्युत राष्ट्रिय प्रसारण लाइनबाट विच्छेद भएको छ ।
लमजुङबाट राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जडान गरिएको १३२ केभी राष्ट्रिय प्रसारण लाइन बोकेको राइनास नगरपालिका–८ तार्कुघाट क्षेत्रको क्षतिग्रस्त टावर । तस्बिर सौजन्य: नेपाल विद्युत् प्राधिकरण ।
लमजुङबाट उत्पादित विद्युतभार बोकेको प्रसारण लाइन राइनास नगरपालिका–८, पाखेटार (फूलबारी र पाउँदीपारी) टावर मर्स्याङ्दीमा खस्दा राष्ट्रिय प्रसारण लाइनबाट विद्युत् विच्छेद हुन पुगेको हो । लमजुङमा सञ्चालित ७० मेगावाटको मध्यमर्स्याङ्दी जलविद्युत् केन्द्र, ५० मेगावाटको माथिल्लो मर्स्याङ्दी ‘ए’ जलविद्युत् आयोजना साथै ५ वटा साना जलविद्युत् आयोजनाको उत्पादन बन्द छ ।
मध्यमर्स्याङ्दी जलविद्युत् केन्द्र प्रमुख शिवकुमार साहका अनुसार मध्यमर्स्याङ्दीबाट विद्युत् भार बोकेर राष्ट्रिय प्रसारण लाइनको ९ नं. को टावर पहिरोले मर्स्याङ्दीमा खसाउँदा राष्ट्रिय प्रसारण राष्ट्रिय प्रसारण लाइनबाट विद्युत् विच्छेद छ । उनका अनुसार टावर ढलेर विद्युत् प्रसारण हुन नसक्दा ‘ट्रिपिङ’ भएपछि विद्युत् उत्पादन हुन सकेको छैन ।
उनका अनुसार विद्युत् ‘ट्रिपिङ’ को समस्या भएपछि एउटा टर्बाइन शुक्रबार राति साढे १ बजे र अर्को टर्बाइन २ बजे बन्द गरिएको हो । उनका अनुसार शनिबार बिहानमात्रै प्रसारण लाइनको टावर मर्स्याङ्दीमा बगेको सूचना आएको बताए । ‘पहिरोले ढालेको टावर अहिले क्षतिविक्षत रुपमा बाढीमा छ । यसलाई बाढीबाट झिक्न मुस्किल छ,’ उनले भने ।
उनका अनुसार नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले प्रसारण लाइनको मर्मतका लागि प्राविधिक टोली खटाएको छ । क्षतिग्रस्त टावरको पुनर्निर्माण गरी प्रसारण लाइन सुरु गर्न प्राधिकरणको पोखरा ग्रिड शाखा र केन्द्रीय कार्यालयका प्राविधिक इन्जिनियर खटिएको उनले बताए ।
माथिल्लो मर्स्याङ्दी ‘ए’ जलविद्युत् आयोजना बाढीपहिरोका कारण यसअघिदेखि बन्द छ । चिनियाँ लगानीमा निर्मित ५० मेगावाटको उक्त आयोजना बाढीपहिरोका कारण असार १ गतेदेखि नै बन्द छ । मर्स्याङ्दीमा आएको बाढीले ३० वटा पोल ढलेपछि आयोजनाको उत्पादन बन्द भएको आयोजनाले जनाएको छ ।
मध्यमर्स्याङ्दीको स्वीचयार्डमार्फत् केन्द्रीय प्रसारण लाइनमा जोडिएको ५ मेगावाटको सिउरी साना जलविद्युत् आयोजना, ४ दशमलक ४ मेगावाटको राँधी साना जलविद्युत् आयोजना, ४ मेगावाटको खुदी जलविद्युत् आयोजना, २ मेगावाटको छन्दीखोला जलविद्युत् आयोजना र १ सय ८३ किलोवाटको स्याँगे लघु जलविद्युत् आयोजनाको उत्पादन बन्द छ ।
लमजुङ र तनहुँका ३१ हजार घरमा अन्धकार
लगातारको वर्षा र यसपछिको बाढीपहिरोले विद्युतीय पोल बगाउँदा जिल्ला विद्युत् आपूर्ति बन्द भएको छ ।
विद्युतीय संरचनामा क्षति पुग्दा लमजुङको साविक ३४ गाविस र लमजुङसँग सीमा जोडिएको तनहुँको साविक ३ गाविसमा विद्युत् सेवा अवरुद्ध भएको हो । शुक्रबार साँझदेखिको निरन्तर वर्षा र त्यसपछिको बाढीपहिरोले लमजुङ र तनहुँका गरी ३१ हजार घरधुरीमा विद्युत् अवरुद्ध भएको छ ।
वर्षासँगै आएको बाढीपहिरोले विद्युतको पोल बगाउनुका साथै प्रसारण लाइनसमेत छिनाएको नेपाल विद्युत् प्राधिकरण लमजुङ वितरण केन्द्रका प्रमुख यमकुमारी गुरुङले बताइन् । उनका अनुसार डुम्रेबाट गोरखा हुँदै लमजुङ ल्याइएको ३३ केभी लाइनको ४ वटा पोल ढल्दा शुक्रबार रातिदेखि विद्युत् आपूर्ति बन्द छ ।
प्रकाशित : असार १९, २०७८ १९:५१